FAQ -4- Learn to Speak English Online
မေး.....ပိုင်ဆိုင်မူ့တွေကို သုံးတဲ့နေရာမှာ ( of ) နဲ့ ( 's ) ကိုဘယ်လိုခွဲခြားသုံးရမလဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ် ဆရာခင်ဗျား။
​ဖြေ.....The leg of the chair is broken.The dog's leg is broken. ဒီစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။Noun ( of ) ( Noun ) ..ဥပမာ...The leg of the chair...ဒီအသုံးကို- အရာဝတ္တုတွေ၊ သက်မဲ့တွေအတွက်အသုံးပြုပါတယ်။( 's ) ကို လူပုဂ္ဂိုတွေ၊ တိရိစ္ဆာန်၊ အဖွဲ့အစည်း၊နိုင်ငံတွေအတွက်အသုံးပြုပါတယ်။My father's house is very nice.The house of my father is very nice. ဒီစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းမှာ နံပါတ် ၂ပုံစံကို အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ အဆင့်မြင့်စာပေ၊ အက်ဆေးများကိုရေးသားမယ်ဆိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ My father ဆိုတာ လူပုဂ္ဂိုဖြစ်တဲ့အတွက် 's ကိုပဲသုံးပါ။( U Ba's son is two years old. ) လို့သုံးသင့်ပါတယ်။ - လူပုဂ္ဂိုဖြစ်တဲ့အတွက်( The son of U Ba is two years old. ) လို့မသုံးသင့်ပါ။..( The books of the store are nice. ) လို့သုံးသင့်ပါတယ်။( The store's books are nice. ) လို့မသုံးသင့်ပါ။ - အရာဝတ္တု ၊ သက်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်---------------------------------------------------Of ကိုအောက်ပါအခြေနေများမှာလည်း အသုံးပြုပါတယ်။( Expressions of quantity - အရေအတွက်များကိုဖော်ပြခြင်း )A log of ( A lot of students are watching the English lessons )A number of ( A number of people study English. )A great deal ofA majority of / minorityA couple of---------------------------------------------------------All / almost all / most / many/ much /afew /alittle / one/two / three.....Both / several / some / any.................စတာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာယှေဘူယျသဘောကိုခြုံပြောရင်....of မလိုပါဘူး။ ဥပမာAll people are watching the football game.( လူတွေအားလုံး ဘော့လုံးပွဲကြည့်နေတယ် ) ...ဘယ်သူဘယ်ဝါရယ်လို့ မရည်ရွယ်....အားလုံးကိုခြုံပြောတာ..........။- တိကျတဲ့သဘောကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့...of ကိုကြားခံသုံးရပါမယ်။နောက်ကNoun ကို the နဲ့သုံးရပါမယ်.......ဥပမာAll of the people in Buffalo city are watching the football game.( Buffalo city ဆိုတဲ့ တိကျချက်ကိုရည်ညွှန်းလို့...of ကြားခံသုံးပါတယ်။ ) မေး…ဆရာ တစ်လောက you and I အသုံးရှင်းပြပေးတာဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ တကယ်လို့ I and You သုံးရင်ရော ရပါသလားရှင့်။
​ဖြေ…..သုံးလို့ရပါတယ်။ သဒ္ဒါအရလည်း မှန်ပါတယ်။သို့သော်..ဒီလိုအသုံးဟာ ( မယဉ်ကျေးဘူး၊ ရိုင်းတယ် ) လို့ပြောပါတယ်။You and I will go to the mall tomorrow.( မင်းနဲ့ငါ..မနက်ဖြန်မှန် ကုန်တိုက်ကြီးတွေဆီသွားကြမယ် )..ဒါကပုံမှန်သုံးရမဲ့အသုံးဖြစ်ပါတယ်။I and you will go to the mall tomorrow. ဆိုရင်..သဒ္ဒါအရမှန်ပေမဲ့ မယဉ်ကျေးပါဘူး။ ရိုင်းပါတယ်။ မသုံးသင့်ပါ။ တကယ်တမ်းပြောရရင်Somebody and I အသုံးဟာ…သဒ္ဒါအရ မမှန်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရမ်းယဉ်ကျေးပါတယ်။ I and somebody အသုံးဟာ သဒ္ဒါအရမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အရမ်းရိုင်းတယ် ၊ မယဉ်ကျေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ​မေး.......ဆရာ You and I လား You and me လို့သုံးရမလား မသဲကွဲလို့ပါ။
​ဖြေ........Subject နေရာမှာသုံးမယ်ဆိုရင်...You and I လို့သုံးပါ..ဥပမာYou and I should have lunch.( မင်းရော ငါရော နေ့လည်စာ စားသင့်ပြီ )Object နေရာမှာသုံးမယ်ဆို...You and me လို့သုံးပါ။He'll blame you and me.( သူက မင်းနဲ့ငါကို လွှဲချလိမ့်မယ် ) Present Perfect Tense အသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ မကြာခနလွဲမှားတတ်တဲ့ အရာတွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်
​Present Perfect Tense ကိုအောက်ပါအခြေနေမှာသုံးတယ်။( ၁ ) တစ်ခုခုအခုလုပ်ကိုင်ပြီးစီးသွားတာကိုဆိုလိုချင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်။( ၂ ) အတိတ်က လုပ်ခဲ့သော ကိစ္စများသည် ပစ္စုပ္ပန်( ယခု ) တိုင်အောင်ဖြစ်စဲ( ၃ ) အချိန်ကာလတိကျမူ့မရှိတဲ့ အတိတ်က ဖြစ်စဉ်ကိုရည်ညွှန်းချင်တဲ့အခါ။--------------------------------------------------------------------------------နံပါတ် ( ၁ ) ကိုရှင်းပါမယ်။.............တစ်ခုခုအခုလုပ်ကိုင်ပြီးစီးသွားတာကိုဆိုလိုချင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်။I have done my homework. ( ကျနော် အိမ်စာ လုပ်ပြီးပြီ ) - အခုပြီးတာShe has cooked dinner. ( သူမ ညစာ ချက်ပြီးပြီ ) - အခုပြီးတာ( အထူးမှတ်ရန်...Past Perfect Tense ကလည်း ပြီးတာကိုပဲပြောတယ်..ဘယ်လိုကွာသလဲ ဆိုတော့....past perfect မှာ...အမြဲတန်း simple past tense နဲ့တွဲလာရတယ်....ဒါကို မှတ်ထားကြပါ.....).........ဥပမာI did not have any money because I had lost my wallet.( ပိုက်ဆံအိတ်ပျောက်သွားလို့...ပိုက်ဆံမရှိဘူး ).....နားလည်အောင် ဘာသာပြန်ရရင် - ပိုက်ဆံအိတ်ပျောက်သွားပြီ ( ပျောက်ဆုံးသွားပြီ ) ဖြစ်သောကြောင့် ကျနော့်မှာ ပိုက်ဆံမရှိဘူး။.............ဒါပေမဲ့..ဒီလိုပြောနေတာတွေမှာ..ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေဟာအတိတ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေဖြစ်တယ်။နံပါတ် ( ၂ ) ကိုရှင်းပါမယ်..........အတိတ်က လုပ်ခဲ့သော ကိစ္စများသည် ပစ္စုပ္ပန်( ယခု ) တိုင်အောင်ဖြစ်စဲI have lived in Thailand for five years. ( ကျနော် ထိုင်းမှာနေတာ ငါးနှစ်ရှိပြီ )လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်ကစပြီး ခုထိနေစဲ...........................( အထူးမှတ်ရန်......နောက်က ကြာညောင်းချိန် ကာလ...for five years ဆိုတာမပါရင် အဓိပ္ပါယ်ပြောင်းသွားတယ်....ကျနော် ထိုင်းမှာ နေဘူးတယ် ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်)ကြာညောင်းချိန်မပါပဲ.....အတိတ်က အဖြစ်အပျက် အခုထိဖြစ်စဲဆိုတာကိုသုံးချင်ရင်တော့....present perfect continuous ကိုသုံးပါ။ ဥပမာ- I have been living in Thailand.( Since , ago ဆိုတာတွေကလည်း ကြာကြောင်းချိန်ကိုပြောတာပဲ )နံပါတ် ( ၃ ) ကိုရှင်းပါမယ်.............အချိန်ကာလတိကျမူ့မရှိတဲ့ အတိတ်က ဖြစ်စဉ်ကိုရည်ညွှန်းချင်တဲ့အခါ။I have worked in Thailand. ( ကျနော် ထိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်ဘူးတယ်...အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်)ဘယ်တုန်းကမှမသိဘူး...အတိတ်တော့...အတိတ်ကပဲ..ကာလတိကျမူ့မရှိဘူး..ဒါပေမဲ့အခုတော့...ထိုင်းမှာ မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘော။အချိန်ကာလ တိကျမူ့ရှိရင်.....simple past tense ကိုသုံးပါမယ်။ ဥပမာI worked in Thailand last year. ( ကျနော်မနှစ်က ထိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် )။- I have beenacop. ( ကျနော် ရဲလုပ်ခဲ့ဘူးတယ် ).....ဘယ်တုန်းကဆိုတာ တိတိကျကျမရည်ညွန်းဘူး....။ တစ်ချိန်က ရဲလုပ်ခဲ့ဘူးတာကိုပဲပြောတယ်။( အထူးမှတ်ရန်......have + been ကိုတွေ့တိုင်း present perfect passive voice မဟုတ်ပါအပေါ်က စာကြောင်းမှာ been ကို ( be ရဲ့ Verb -3တနည်းအားဖြင့် past participle အဖြစ်အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်တယ် )........I have beenacop for eight years. ဆိုတာမှာ ကြတော့ ကာလ သဘောဖြစ်တဲ့........for eight years ဆိုတာ ပါလာတဲ့အတွက်......ကျနော် ရဲလုပ်နေတာ ရှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ...ဆိုလိုတာက အရင် ရှစ်နှစ်က လုပ်တာ ခုထိ လုပ်စဲဆိုတဲ့သဘော။
မေး....ဆရာ No matter နဲ့ Not at all ဘယ်လိုကွာခြားပါသလဲဘယ်နေရာမှာဘယ်စကားစုသုံးရတယ်ဆိုတာပြောပြပေးပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ
​ဖြေ...Not at all ရဲ့အဓိပ္ပါယ်က ( ကိစ္စမရှိပါဘူး...ရပါတယ် )...ဒါပေမဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရရင်..I don't mind - စိတ်မဆိုးပါဘူး ဆိုတဲ့သဘော...ဥပမာDo you mind if I sit here?" "Not at all."( ကျနော်ဒီနေရာထိုင်မယ်ဆိုရင်..စိတ်ရှိမလား ခင်ဗျား )- ကိစ္စမရှိဘူး ရပါတယ်။ ( စိတ်မရှိပါဘူး..စိတ်မဆိုးပါဘူး )။No matter - ( matter - ဆိုတာက....the reason for pain or worry:- စိုးရိမ်၊ နာကျင်ရတဲ့အကြောင်း )No matter - စိုးရိမ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး ၊ နာကျင်ထိခိုက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး ဆိုတဲ့သဘော။ ဒါက ဝေါဟာရ အဓိပ္ပါယ်။ အီဒီယမ် အဓိပ္ပါယ်က not at all နဲ့ အတူတူပါပဲ။What’s the matter? - ဘာဖြစ်နေတာလဲ ( ဘာတွေစိုးရိမ်နေတာလဲ..ထိခိုက်နေတာလဲဆိုတဲ့သဘော)No matter. - ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ( ဘာမှစိုးရိမ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး )။အီဒီယမ်အသုံးပုံစံ.............I can't do it. ( ငါ မလုပ်တတ်ဘူး )No matter , I'll do it myself. - ကိစ္စမရှိဘူး ရပါတယ်။ ငါ့ဖာသာငါလုပ်ပါ့မယ်။ next